Ny sampandraharahan’ny fiahiana ny fokontany moa no nandray andraikitra feno tamin’izany. Vary amin’anana miampy laoka no natolotra ireo mponina sahirana. Tonga nanatrika teny an-toerana, nisolotena ny ben’ny tanàna, Lalao Ravaloanana, ny mpanolotsain’ny tanàna voafidy teny amin’iny boriborintany iny, Ezekiela Ralaimoria. Ny fitsinjovana ny sahirana ara-pivelomana toy izao, hoy izy, dia ao anatin’ny toromarika nomen’ny Ben’ny tanàna. Ny ezaka dia mbola hotohizana hatrany manerana ireo fokontany izay mandrafitra ny boriborintany fahefatra.